इन्टरनेटको युवा सनशाइन, राजकुमारी अम्रीन मल्होत्रालाई भेट्नुहोस् - भारतीय
इन्टरनेटको युवा सनशाइन, राजकुमारी अम्रीन मल्होत्रालाई भेट्नुहोस्
कसरी व्यायाम संग पेट को बोसो कम गर्न
क्रेडिट: राजकुमारी अम्रीनको टोली द्वारा साझेदारी गरिएका छविहरू
“नमस्कार साथीहरू,चाई पी लो! ', जब सम्म तपाईं २०१ since देखि उत्तरी ध्रुवमा हाइबरनेट गर्दै हुनुहुन्न, यो सम्भव छैन कि तपाईंले सानी केटीलाई दस सूर्यको प्रकाशको साथ यो सटीक वाक्यांश भन्नुभएको छ। पाँच वर्षको कलिलो उमेरमा र लगभग आधा मिलियन इन्स्टाग्राम अनुयायीहरूको साथ, सूर्यको छाल युवती अमरिन मल्होत्रा ​​आफ्नै दायाँमा एक तारा हुन्। अम्रिन २०१ 2018 को जुलाईमा प्रख्यात छिन् जसले उनको भिडियोको 'हेलो फ्रेंड्स चाइ पायलट' को भिन्नता बनाउने भिडियोको साथ खिचेकी थिइन। चाँडै नै उनको नामको लागि पर्याप्त खोजीहरू छतबाट शुरू भए। उसको पहिलो दुई भिडियोहरू लाखौं हेराईहरू भएका छन्, पछि। त्यस पछि, उनको पोष्टहरूले अधिक ध्यान पाउँदैछन् किनकि राजकुमारी अम्रेनले हाम्रो फीडहरू र दिमागमा उस्तै छाप राख्छिन्।
उनको सफलता भिडियोमा उनीद्वारा प्रयोग गरिएको क्याचफ्रेजले यस सानो कलाकारलाई द्रुत रूपमा मेमेमा परिवर्तन गर्‍यो। अम्रीनले उनको सफ्ट हेजल आँखाहरू, उनको मुस्कुराउने मुस्कान र कहिलेकाँही अन्तहीन, मनमोहक बेंटरको साथ नेटिजाइनहरूको हृदयहरू क्याप्चर गरे। उनको पृष्ठ, जुन उनको काका र उसकी आमा द्वारा ह्यान्डल गरिएको छ, लगातार जीवन, पोस्ट र उनको जीवनको बारेमा अपडेट राख्दछ र हामी यो सानो ताराको लागि पर्याप्त पाउन सक्दैनौं!
अमरिनलाई फेसन मन पर्छ। उसलाई केहि बर्ष दिनुहोस् र हामी निश्चित छौं कि उनी एक फैशनिस्टा हुन मानिनेछ। उनको केहि अन्य शौकहरूमा बेकि,, गायन र नाच समावेश छ। उनले पहिलो पटक इन्डुल फेस्टको बेला बेकिंगमा हात हाल्ने प्रयास गरिसकेपछि, उनी पूर्ण रूपमा प्रक्रियाद्वारा बेस्टो थिईन्। हामीले भनिरहेका छैनौं कि उनी अहिले पेस्ट्री शेफ हुनको लागि लक्ष गरिरहेकी थिइन्, तर उनी पक्कै त्यस्तो व्यक्ति हुन् जसले कहिल्यै चुनौतीबाट टाढा नजाने।
जस्तो कि २०२० प्राय जसो हाम्रो लागि रमाईलो भन्दा कम भएको छ अम्रीनको लागि पनि। अनलाइन स्कूलको अभ्यस्त हुनु, साथीहरूद्वारा घेरिएको वा उनको राजकुमारीको पोशाकमा जन्मदिनको भोजहरूमा भाग लिन सक्षम हुनु उनको लागि चुनौतीपूर्ण भएको थियो तर उनले यी डरलाग्दो परिस्थितिहरूमा चाँदीको अस्तर भेट्टाइन्। एक कान्छी बहिनीको रूपमा, अम्रीनले आफ्नो भाइसँग बढी समय बिताएकी छ, महामारीको दौरान पुन: जडान र केवल बन्धन। त्यो सुन्दर छैन? आमाको एउटी केटी, अम्रीनले युनिकोर्न, उनको आमा, म्यागी (कुनै खास क्रममा हामी आशा गर्दैनौं) लाई माया गर्छौं र मुम्बईतर्फ एउटा विशेष पुल बार्दछ र छिट्टै भेट्न चाहन्छ। हामीले एक अफवाह सुनेका छौ कि यो जवान तारे जब उनी हुर्किएकी राजकुमारी बन्न चाहान्छिन् र हामीले त्यसलाई सानो प्याकेजको लागि ठूला सपनाहरू भन्नुपर्दछ तर हामी आशा गर्छौं कि उनले हरेक सपना साकार गर्ने सबै अवसरहरू पाउँदछन्।
को रूपमा उनको भिडियोहरूको लागि परिचित'पानी पायलट केटी', अम्रीनले युवा र आगामी प्रभावशाली ब्राण्ड जस्तो ब्राण्डसँग सहकार्य गर्न शुरू गरिन। उनीसँग साझेदारी गरिएको केही ब्रान्डहरू हुन्: प्याम्पर्स, भोल्भो, गिनी र जोनी, ओडोमस। थप रूपमा, अम्रीन पनि नामको साथ प्रेमराज फिल्म निर्माणमा भूमिकाका लागि हस्ताक्षर गरिएको छ'राधा क्यूँ गोरी मेन कुुन काला'।
बच्चाको रूपमा सामाजिक मिडियाको दुनियामा पर्दा र यसको प्रभावहरूले घेरिएको उनको आमाबुबा र काकाले उक्त अनुप्रयोगमा आफु हुनबाट प्रतिबन्धित गरेर नकारात्मकताबाट जोगिन सावधानी अपनाएका छन।
सुरक्षित भन्नको लागि व्यक्तिले उनलाई असीम प्रेम देखायो र हामी यहाँ छौं यसको लागि!
कपाल झर्ने उपायलाई कम गर्ने उत्तम तरिका
कसरी कपाल झर्ने नर रोक्न को लागी
लामो कपाल को लागी अगाडि कटौती
कपाल झर्नुबाट बच्न सल्लाहहरू